Nepal Record » कुन शक्तिको आडमा टिकेका छन् राणा ? कुन शक्तिको आडमा टिकेका छन् राणा ? – Nepal Record
न्यायालयले कार्यकारीसँग ‘पावर शेयरिङ’ गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको हिसावले कतिको ठीक हुन्छ रु उहाँले विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको होइन त भन्नुभयो । तर, परिस्थितिजन्य प्रमाण र घटनाक्रम जसरी विकास भएर आए, त्यसले उहाँले भाग माग्नुभएको होइन भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिएन । हिजोदेखिनै भागबन्डा खोजेको कुरालाई पुष्टि गर्ने एउटा प्रकरण यो भयो ।
न्यायलयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका व्यक्तित्वहरूबाट वक्तव्य आएका छन् । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आइसीजे०, ह्युमनराइट वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पनि वक्तव्य आइसक्यो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो, अब नेपालमा मात्र सीमित छैन् ।
संसारभरका वहालवाला न्यायाधीशहरू आइसीजेमा आवद्ध छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सवालमा पनि आइसीजे बोलेको थियो । यी सबैले विरोध गरिरहँदा पनि जबराले कसको बलले म बस्छु भनेका होलान् रु न्याय क्षेत्रका स्टेकहोल्डर र जनस्तरबाट राजीनामा मागिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वक्तव्य नै निकालिसक्यो । तर, पनि जबरा कसको बलमा राजीनामा दिन्न भनिरहनुभएको छ रु
हामीले गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीसँग बुझ्यौँ, कसैले पनि बल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थिएन । अचानक सर्वोच्च अदालत परिसरमा ९हामी हमेशा उभिएर घाम ताप्ने ठाउँमा हामीले नारा लगाउँदा० प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्न लगाउनेजस्तो निकृष्ठ काम प्रधानन्यायाधीशबाटै भयो १ आन्दोलनमा केही मान्छेलाई घुसपैठ गराइयो ।
यो आन्दोलन केवल अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश हट्दैमा सबै समस्याको समाधन हुने होइन । मा। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदनले धेरै कुरा ल्याएको छ ।
जस्तो, प्रधानन्यायाशीले संवैधानिक परिषदमा गएर बस्न हुने कि नहुने रु त्यहाँ नियुक्त गर्ने अनि आफैँले आएर जर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने सवाल छ । वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने कसैको पनि आस्था रहनेवाला छैन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । घुस नदिइ तारिक दिइन्न भने अदालत कहाँ पुगेको होला रु ठूल्ठूला मुद्दामा सेटिङभन्दा बाहेक हुँदैन भन्ने बजारमा व्याप्त छ । यी सबै स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो आन्दोलन कोशेढुंगा सावित हुनुपर्छ ।